ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ရှေ့တွင်ချိန်းတွေ့
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: အောက်တိုဘာ. 14 2020 |4မိဖတ်ပြီးသား
ငါ့အထီးသူငယ်ချင်းတစ်ဦးသူတစ်ချိန်ကပထမဦးဆုံးနေ့ရက်တွင်အရက်မူးတက်ပြတော်အပေါင်းတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုကျော်အန်ကြွရောက်တော်မူသောမိန်းကလေးတစ်ဦးရက်စွဲပါသည်ကိုငါကြား! ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာကကျွန်မကျနော်တို့လွင်ပြင်ရွားလှဖြစ်ကြောင်းရက်စွဲများအားလုံးခဲ့ကြရသည်သေချာပါတယ်ကြောင့်ကြုံတွေ့ခံစားဖူးဘူးပေမယ့်, လူတစ်ဦးသည်လုံးဝမသင့်လျော်သောအရာတစ်ခုခု ပြု. နှင့်သင့်မြေပြင်ကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်တပြင်လုံးကိုသင်မျိုချလိုဆန္ဒရှိရာအရပ်,. ထိုအခါငါငါတို့ရှိသမျှသည်ပြီးခဲ့သည့်တစ်မိနစ်မှာဖျက်သိမ်းခံရကျွန်ုပ်တို့၏တရားမျှတရှယ်ယာခဲ့ကြရသည်ကိုပင်ဖြစ်ကောင်းထရပ်လျှက်တော်တော်လေးသေချာဖြစ်ကြောင်းကို. Plus အားငါတို့ရှိသမျှသည်မှားသွားပထမဦးဆုံးရက်စွဲများအကြောင်းထိတ်တလန်ပုံပြင်များကြားဖူးတယ်. ဒါကြောင့်ဘာကိုဤဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူမှားသွားပြီနှင့်မည်သို့ရှောင်ရှားနိုင်. ဒါဟာအားလုံးငယ်နှစ်စကားသည် '' ချိန်းတွေ့ရှေ့တွင် 'ဖို့ဆင်းလာ.
အဘယ်အရာကိုရှေ့တွင်ချိန်းတွေ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်? ကောင်းပြီငါချိန်းတွေ့အတွေ့အကြုံချောချောမွေ့မွေ့သွားနှင့်ပတ်သက်နှစ်ဦးစလုံးသည်လူများအဘို့ပိုပြီးပျော်စရာဖြစ်ခွင့်ပြုပါက unspoken လမ်းညွှန်ချက်များအစုတခုအဖြစ်ကစဉ်းစား. ၏သင်တန်းကိုကျနော်တို့နောက်ထပ်လူတစ်ဦးဘာလုပ်တယ်ထိန်းချုပ်ဖို့ဘယ်တော့မှမနိုင်, ဒါကြောင့်သာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပြုအမူများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်ရွေးချယ်နိုင်သည်, ကျနော်ကအပြင်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဆက်ဆံဖို့ရွေးချယ်ချိန်းတွေ့ရှေ့တွင်ကိုချီးမြှောက်ပြုပါလျှင်ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ချိန်းတွေ့ခြင်း၏ပိုပြီးပျော်စရာနှင့်စီမံခန့်ခွဲသည့်အတွေ့အကြုံရှိသည်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်. Plus အားမိမိကိုယ်ကိုအဘို့အမူအကျင့်တစ်ခု code တွေကိုရှိခြင်းဘေးကင်းလုံခြုံကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကူညီပေးနိုင်သည်.
ချိန်းတွေ့ရှေ့တွင်ကိုပဌနာသောအခါတူအမှုအရာတို့ပါဝင်နိုင်ပါသည်, ဘယ်လိုမကြာခဏသင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြား, သင်တိုင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်ဖုန်း call ကိုမှ reply ရှိမရှိ, ရက်စွဲများများအတွက်အချိန်နှင့်နှောင်းပိုင်း, သင်သည်အဘယ်သို့ဝတ်ဆင်, သင်သည်သင်၏နေ့ရက်တွင်ဆွေးနွေးသောအရာကို, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသည့်အခါ, ဒါပေမယ့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့သင်ကအခြားလူတစ်ဦးကိုကုသတဲ့နည်းနှင့်သင်ဆက်ဆံခံရဖို့မျှော်လင့်တဲ့နည်း. သင်မြင်သည်အတိုင်းကရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကအတော်လေးကျယ်ပြန့်ဖုံးလွှမ်းဒါကြောင့်နည်းနည်းလွှမ်းမိုးသောနှင့်ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်လာနိုင်ပါသည်. Plus အားသင်ချိန်းတွေ့ဖို့ကြွလာသောအခါလူသည်ဘာဖြစ်သည်မတူညီသောအတွေးအခေါ်များအမျိုးမျိုးရှိသည်များနှင့်လက်ခံနိုင်ဖွယ်အပြုအမူမဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်, ထိုသို့ပြုဖို့အကောင်းဆုံးအရာသည်သင်တို့အဘို့အအလုပ်မဖြစ်သောလမ်းညွှန်ချက်များသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် set ကိုဖန်တီးဖြစ်ပါတယ်, ပြီးတော့သူတို့ကိုကပ်. သင်တို့သည်ဤမျှကိုရွေးချယ်ပါလျှင်သင်အမှန်တကယ်သူတို့နှင့်အတူသင့်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်များတစ်ချိန်ချိန်ရှယ်ယာမှာသင်သည်တတ်နိုင်အခြားသူတစ်ဦးမှထွက်ရှိရသည့်ရက်စွဲနှင့်တပြိုင်နက်, နှင့်သေချာသင်သည်နှစ်ခုစလုံးပျော်ရွှင်မျှမျှတတအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ချိန်းတွေ့ဖို့ဘယ်လောက်နဲ့သဘောတူညီချက်တွင်ရှိစေရန်ဆွေးနွေး. ဒီနှစ်မျိုးလုံးကလူကနေစုစုပေါင်းရိုးသားမှုနှင့်ရင့်ကျက်တဲ့အချို့အဆင့်ကပါဝင်ပတ်သက်. လူတွေပြုလျှင်ဒီပိုမကြာခဏအများကြီးကြေကွဲဖွယ်ရှောင်ကြဉ်ရကြလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်.
ပထမဦးဆုံးနှင့်ဗွေဆော်သော်လည်း, ချိန်းတွေ့ရှေ့တွင်စောင့်ကြည့်လေ့လာသင်တို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏. ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအကောင်းခံစားမိနေတဲ့လမ်းကိုပြုမူလာသောအခါငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်နှင့်ငါတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားမှုနဲ့ Self-လေးစားကြီးထွားအောင်၏အတည်ပြုရန်စတင်.
ဥပမာအားဖြင့်သင်သည်သူတို့အားတဖန်ကြည့်ဖို့သွားကြသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်သင်တစ်ကြိမ်သာရက်စွဲပါပါပြီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမသိစေခြင်းငှါယဉ်ကျေးကြောင်းဆုံးဖြတ်စေခြင်းငှါ,, သို့မဟုတ်သင်တို့သည်ဤမလိုအပ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်စေခြင်းငှါ. သင်သည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်သင်ပိုကောင်းလူတစ်ဦးကိုမသိမှီတိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်းရန်ပိုကောင်းသင်သည်အကိုက်ညီဆုံးကြောင့်သင်တို့ကိုပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်လိင်ရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းကိုရွေးချယ်ပါစေခြင်းငှါ. သို့မဟုတ်သင်နေ့စွဲများပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မက်ဆေ့ခ်ျများသို့ပြန် လာ. မခံရလောက်စောင့်မခံရ ပတ်သက်. အလွန်ခိုင်ခံ့သောစိတ်ခံစားချက်များရှိစေခြင်းငှါ. ဤ 'ချိန်းတွေ့ရှေ့တွင်' အောက်တွင်အားလုံးပြိုလဲအလိုတခုတည်း.
အမှန်တွင်လူများစွာကရိုးရိုးလေးအထက်အကျင့်ကောင်းကိုပဌနာလို. သို့သော်ချိန်းတွေ့ရှေ့တွင်၏အခြားအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးပွေလီလှ၏အချို့သောမီးခိုးရောင်ဧရိယာပိုမိုရနိုင်. ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်ချိန်းတွေ့အသီးအသီးဧရိယာစဉ်းစားတစ်ခုချင်းစီအတွက်သင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များဆုံးဖြတ်ရန်အချိန်ယူ. သင်နောက်ဆုံးမိနစ်မှာကိုယ်တက်ရပ်နေသောရက်စွဲတို့ကိုမကျင့်သောလမ်းညွှန်စေခြင်းငှါ, သို့မဟုတ်သင်တို့သည်အလွန်နှောင်းပိုင်း၌နေသောသူမရက်စွဲအမျိုးသမီးများကျင့်သော. သင်တစ်ဦးထက်ပိုသော classy ရိုက်ချက်ပေးစေခြင်းငှါအလိုရှိ၏သင်တို့ကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းလျှင်သင်ရက်စွဲတစ်ခုအပေါ် mini ကိုအဝတ်ဝတ်ခြင်းမဆုံးဖြတ်စေခြင်းငှါ. ဤလမ်းညွှန်ချက်များသည်သင်ကဲ့သို့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရလိမ့်မည်နှင့်အရေးကြီးသောအမှုသည်သင်တို့အဘို့အသက်သာသည်အဘယ်အရာပေါ်တွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရဖြစ်ပြီးတစ်ဦးချင်းသကဲ့သို့သင်တို့အဘို့အလက်ခံနိုင်ဖွယ်မဟုတ်ပါ.
တစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်မကြိုက်ဘူးတစ်ခုခုလုပ်ရင်ဒါကြောင့်သင်မည်သို့ကိုင်တွယ်ကြဘူး? တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတဦးဖောက်ဖျက်တဲ့အခါသင်ဘာလုပ်? ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်တော်တခြားတယောက်ယောက်ကမည်သို့ပြုမူသည်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်မဟုတ်သလိုကျွန်တော်လိုမီ. ထိုကြောင့်သင်တို့လက်ခံဖို့နဲ့ရှိရာအရပ်၌သင်တို့မျဉ်းဆွဲမည်ဟုဆန္ဒရှိတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသင်ဆင်းရန်ဖြစ်သည်. ဥပမာအားဖြင့်သင့်ရဲ့လမ်းညွှန်တစ်ဦးသင်ကရက်စွဲကိုစောင့်ဆိုင်းစောင့်စေခြင်းငှာမလိုချင်ကြဘူးကြောင်းလျှင်, နှင့်သင်နှောင်းပိုင်းသူသည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရှိသည်, ခေါ်ဆိုခသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအချက်သူတို့ကိုသင်သည်ဤအကြောင်းကိုမည်သို့ခံစားရသိစေရန်ဖြစ်သည်. သင်သည်အပြစ်တင်တစ်ဦးမဟုတ်သည့်အတွက်ဒီလုပ်နိုင်, ရိုးရှင်းစွာသင်မည်သို့ခံစားရဝေမျှခြင်းအားဖြင့်ကတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆက်ဆံရေးအတွက်သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုခုမဖြစ်ကြောင်းကိုရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်း. သို့သော်သူတို့ဘာတွေထပ်တလဲလဲသင့်လိုင်းဖြတ်ကူးလျှင်အကြောင်း? ကောင်းပြီကိုသင်လိုင်းသင်တို့အဘို့အဘယ်သို့ကုမ္ပဏီဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. တကယ့်သင် upsets သင်အပြုအမူသည်းမခံနိုင်ပြီးတော့အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရိုးရိုးသင်တို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးမထိုက်မတန်ဖြစ်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေဆိုရင်. သင်သည်သူတို့ပဲသင်တစ်ခုခုကြောင့်ပျော်ရွှင်စွာသွားနှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့သင့်လမ်းညွှန်ကို update ကြကုန်အံ့ရန်လိုအပ်မည်ပြုလျှင်သင်မည်သို့ခံစားရ shared ပြီးတဲ့အခါ, သို့မဟုတ်သင်စေပြီးမှလွှတ်လိုက်ရန်လိုအပ်မည်. ဒါဟာသင့်ကိုယ်သင်နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်နယ်နိမိတ်များအတွက်ယုံကြည်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပုံဖြစ်သည်.
အဓိကအစိပ်အပိုင်းများအတွက်ကြောင်းသတိပြုပါ, ဒီဆောင်းပါးမှာတစ်လျှောက်လုံးငါ 'လမ်းညွှန်ချက်များ' 'အစားထက်' 'စည်းမျဉ်းဥပဒေ' ကိုရည်ညွှန်းပါပြီ. ငါသည်သင်တို့ကိုသင်နှင့်အဘယ်သို့သောကျိန်းသေလက်ခံနိုင်ဖွယ်မဟုတ်ပါများအတွက် OK ကိုခံစားရဘာကိုစမ်းသပ်မြင်အသုံးအနှုန်းများအတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အတူအချို့သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိဘို့ကအရေးကြီးပါတယ်ထင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်. သင်တို့သည်ဤမျှလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်ကြီးထွားနှင့်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှလည်းချိန်းတွေ့ခြင်းအကြောင်းကိုသင်၏အတွေးအခေါ်များအစွမ်းသတ္တိ. အမြဲတမ်းအပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်, သို့သော်ငါသည်သင်တို့ချိန်းတွေ့ရှေ့တွင်နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်နယ်နိမိတ်များမှကပ် Suggest မဆိုအပ်ပေးတော်မူသောအချိန်တွင်သင့်အဘို့အမှန်ရာကိုထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြိမ်. ငါတို့သည်ကိုယ်လမ်းညွှန်ချက်များကိုချိုးလိုက်တဲ့အခါအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုကိုက်ဖို့ပြန်လာ.